Yiqiniso Okokuqala - oluyisisekelo ukudla lesifanele futhi unempilo. ukudla Zezıhlabane kuvusa esiswini futhi kuqinise abhidliza izindonga zayo. Ngisho nabantu lokwelekelela ukubukela ukudla kwabo, ukubala ngokucophelela zonke ikhalori emikhiqizweni umswakama, kumele kudingeke ukuthi esifundweni sakho Ukudla okunama-kilojoule amancane isobho. Nokho, ukunambitheka lokhu dish ingcono kakhulu ziqondakala indlebe. Ezinye okuhlukile akukho kubo mubi kunothango yobuciko yokudlela yangempela. Futhi ukupheka kubo ekhaya ngeke kube nobunzima. Kulokhu, awudingi iyiphi imikhiqizo angavamile. Ufuna ukufunda ukupheka isobho? Kulula kabi.
Le nguqulo izitsha yokuqala bayojabulela wonke amalungu omkhaya, ngaphandle kokukhetha. Lokhu dish mnene futhi okunomsoco, okuyinto ukunikeza umuzwa satiety for isikhathi eside. Kaningi kuna isobho yenziwa ngamagxolo, imifino noma amakhowe. Kodwa uma ufuna, ungakwazi ukwengeza izinkukhu ngisho ukhilimu. Lokhu iresiphi ukhilimu isobho akuyona nzima ukuze baphumule. Naphezu umsoco wayo, kubhekwa isidlo wezokudla. Ngakho-ke, kungaba ngaphandle ukukhathazeka kancane ukuze sibalo ukusebenzisa inkathi Ukudla ngezizathu zezokwelapha noma yokulawula isisindo.
Ingabe unentshisekelo umbuzo indlela ukupheka isobho nge amakhowe? Ukukwenza kube lula. Uzodinga ohlwini olulandelayo izithako:
0.5 kg mushroom (kithi sikhuluma champignons);
1 ikhanda anyanisi Usayizi medium;
200 of ukhilimu (33% fat);
amafutha yemifino kanye isinongo ukunambitha (pepper, usawoti, garlic).
Lokhu iresiphi ukhilimu isobho isisekelo zonke ukudla okufanayo. Ngakho-ke, ingasetshenziswa njengendlela indlela eyisisekelo ukulungiswa inkambo lokuqala imifino noma inyama. Amakhowe futhi anyanisi ahlanzekile, uthathe yizicucu amancane. Lokhu kuyadingeka ukuguqulwa yabo eminye ibe mass homogeneous. Shisisa amafutha epanini ukuthosa, wafaka umnsalo ku nililethe phansi obala. Bese wengeza amakhowe. Kufanele Fry imizuzu 5, govuza njalo.
engeza ngokucophelela ukuze ingxube ukhilimu pan. Badinga uthele umfudlana elincanyana. Ake konke welula cishe imizuzu engu-20 phezu emlilweni ophansi. Leresiphi ngoba ukhilimu isobho (njengoba, isimiso, futhi bonke abanye) kuzodinga ukuthi abe blender. Le nqubo uyokwenza ukuthungwa izitsha soft and smooth. Yiqiniso, ungasebenzisa izindlela ususondele. Kodwa kulokhu kwakuzomelwe imali echithwa ekulungiseleleni ukudla ngesikhathi okuningi. Futhi umphumela kungenzeka akufani njengoba kuchaziwe cookbooks.
Ngakho, alethe ingxube kuphumele blender kuze bushelelezi. I isobho isicishe ilungele. Vele ungeze izinongo nesweli oqoshiwe. Lapha, wonke olinganise ancike kuphela nguwe. Ukukhonzwa, oyi-kuvuvuzelwa Thyme. Njengoba ubona, lokhu iresiphi ukhilimu isobho ulula, akudingi isipiliyoni kakhulu ubuciko Culinary. Shintsha amakhowe ku abilisiwe inyama emhlophe yenkukhu, broccoli noma ukholifulawa. Umphumela akusilo ngaphansi okumnandi. Leresiphi ingakwazi ngisho amateur izitsha kuphela imifino. Ngaphezu kwalokho, lokhu isobho efana nabantwana abancane. Zizwe ukhululekile uzizamele izithako idale izinguqulo zabo lokhu isidlo kakhulu.
Namathumba labia: Izimbangela Nezingozi Ukwelashwa